Nhau - Nyowani Antibacterial Polyurethane inobatsira Hutano Kufamba
Musi waSeptember 6, liming research yemakemikari uye Design Institute yakatanga yechipiri anti-bhakitiriya polyurethane zvigadzirwa zvemotokari, polyurethane mota skylight girazi edging dzakateedzana zvigadzirwa, ine yakanakisa inorwisa mabhakitiriya zvinhu, kana yaburitswa, yakakurumidza kukwezva kutarisisa.
Chirevo chekuyedza chinoratidza kuti iyo anti mildew mashandiro eiyi nhevedzano yezvigadzirwa inosvika padanho repamusoro 0, uye iyo antibacterial mwero inosvika kupfuura 99.9%. Iyo ine yakanakisa anti muforoma uye inorwisa mabhakitiriya zvivakwa, uye inogona kudzvinyirira hutachiona kubereka uye kukura chiitiko chehwindo kumucheto, kuti uwane chinangwa chepamusoro-inoshanda antibacterial.
"Mushure mekupedzwa kweiyo itsva crust antibacterial mudhiraivho inosanganisa zvinhu, takazvimiririra takagadzira chimwe chigadzirwa chitsva cheanthibhakitiriya - Antibacterial Polyurethane mota skylight magirazi anotenderera, izvo zvakawedzera izvo zvitsva zve polyurethane mukubatsira kufamba kwakanaka." Liming Institute mutevedzeri wemainjiniya, polyurethane yekuvandudza kambani maneja mukuru Zhao Xiuwen akadaro.
Semhando yezvivakwa yekuvandudza nyaradzo yemota, skylight yave zvishoma nezvishoma kugadziridzwa kwevatyairi mota. Nekudaro, iyo skylight iri munzvimbo yemamiriro ekunze kunze kwemota uye inogara nzvimbo mukati memotokari, saka ine zvimwe zvakasarudzika. Kujeka kwedenga kuri pamusoro pemotokari. Pasi pemamiriro echiedza uye nemvura kwenguva yakareba, chimiro chemukati senge gwara remvura rinowanzo kuve munzvimbo ine hunyoro, iyo inopa hotbed yekukura kwemarudzi ese ebhakitiriya uye mafuru. Panguva imwecheteyo, iyo skylight yakabatana yakanangana nejongwe, iyo inowedzera njodzi yekutapukirwa kwebhakitiriya, chakuvhe uye kukurudzira.
Nyanzvi dzinotenda kuti inoverengeka coronavirus pneumonia inzira yechirwere. Iko kuiswa kweanthibhakitiriya girazi yekumonera zvinhu zvakakosha zvakanyanya kudzikamisa kupararira kwebhakitiriya uye kuchengetedza hutano hwevanogaramo.
"Iyo yakateedzana yeAntibacterial Polyurethane mota skylight magirazi edging zvigadzirwa ndezvigadzirwa zvitsva zvegirazi pamucheto kupfeka zvakagadzirwa nekurembedza chipatara zvakazvimiririra nekushandisa nano antibacterial tekinoroji uye kutarisisa zviwanikwa zvepamusoro panguva yekurwisa denda nguva Zhao Xiuwen akataura kuti chigadzirwa chihombe chemaawa 500 mwenje wekupera kuchena grey ari 4; iro hwema giredhi iri 3.0-3.5, iri pamberi peyepasi rose chigadzirwa chakaita giredhi 4.0; iyo yekufambisa uye yekuchengetedza mamiriro eiyo akachinjwa isocyanate akareruka kubva ku15 ℃ - 35 ℃ yezvimwe zvigadzirwa zvakafanana kune - 5 to - 35 ℃; yekutanga yekupasa chiyero chezvigadzirwa iri pamusoro pe98.0%, yakakwira kupfuura 93% yezvigadzirwa zvepasirese zvakafanana; Iyo michina zvimiro senge tensile simba uye kubvarura simba zvinopfuura makumi maviri muzana% kupfuura izvo zvezvigadzirwa zvakafanana pasi. Chigadzirwa chayo chinoshanda chakapasa bvunzo yeakakurumbira mota brand, uye yakave yakapihwa zvakananga kune akawanda auto zvikamu zvekugadzira mabhizinesi.
"Novel coronavirus pneumonia icharamba ichisimbiswa mune ramangwana, uye ichabatsira mukudzivirira kupararira kwezvirwere, kurwisa korona nyumoniya nekuchengetedza hutano hwevanhu." Zhao Xiuwen akadaro.